March 2013 ~ Zawlin IT World
1:05 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, Nokia No comments
NOKIA PC Suite ကိုဒေါင်းရန်----> <<<< download >>>>
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ ဖိုင်းကို install လုပ်းပေးလိုက်ပါ ပြီရင် Nokia Pc Suite ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ
ပြီရင် ဖုန်းကိုချိတ်ပေးလိုက်ပါ ကွန်ပျူတာ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Nokia Pc Suite နေရာမှာ မိမိဖုန်းမော်ဒယ်
ပေါ်လာပါမယ် ဒါဆို အင်တာနတ် ချိတ်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာလုံးပုံနေရာကိုနှိပ်ပြီ ခဏစောင့်နေပါ အမှတ်လေးတက်လာပြီဆိုရင် အင်တာနတ်သုံးလို့ ရပါပြီ ခင်ဗျာ အာလုံးအဆင်ပြေပါစေ
ရွှေဘွတ် အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ - တရုတ် အဘိဓါန်
5:59 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
Shwebook Dictionary Pro သည် ပထမဆုံးသော အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ - တရုတ် Android Mobile Dictionary ဖြစ်ပါသည်။ Definition Word အသစ် ၁၀ ခု အား Server တွင် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပါက မိမိ၏ ဖုန်းနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် Syncrhonize ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိဖုန်းတွင် Root Access မလိုခြင်း ၊ Zawgyi Font အင်စတောပြုလုပ်ရန် မလိုဘဲ လွယ်ကူစွာပင် မြန်မာစာများအား ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ EN-UK English အသံထွက် နှင့် Chinese Native အသံထွက်ကိုပါ နားထောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Chinese အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်တွင် Simplified Chinese နှင့် Traditional Chinese နှစ်မျိုးစလုံး အား လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေပြီး အသံထွက်(pronunciation) ပါ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Shwebook Dictionary Pro အားအသုံးပြုနည်း
ဘယ် - ညာ Swipe ပြုလုပ်ပြီး အခြား Screens များကို ပြောင်းလဲပါ။ (Tab တစ်ခုချင်းအားလည်း ဖိနှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။)
History - Favourite များမှ wrod တစ်ခု ချင်းစီအား ဖျက်ပစ်လိုပါက Item တစ်ခုချင်းအား ၁ စက္ကန့်ခန့် ဖိနှိပ်ထားပြီး Delete အားနှိပ်ပြီး ဖျက်ပစ်ပါ။
Result Screen မှ အင်္ဂလိပ် ၊ မြန်မာ ၊ တရုတ် တစ်ခုချင်းစီ၏ စာသားများအား copy ရယူလိုပါက Copy ယူလိုသော Definition Box အား တစ်စက္ကန့်ခန့် ဖိနှိပ်ထားပြီး ကော်ပီရယူပါ။
အခြား ဆက်သွယ်မှု ရှိသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ရယူလိုပါက Similar Word(s) အားဖိနှိပ်ပြိး ဆက်သွယ်မှု ရှိသော Definitions များအား ကြည့်ရှုပါ။
English နှင့် တရုတ် စာသားအသံထွက်နားထောင်လိုပါက Microsphone တွင် ဖိနှိပ်ပြီး အသံထွက်ပါ။
Most Update Definition Data များအား ရယူရန် About Screen တွင် Synchronize Database ကို နှိပ်ပြီး မိမိဖုန်းရှိ Data များအား ဆာဗာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
မိမိသိရှိပြိးဖြစ်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား Shwebook Dictionary Pro တွင် ထည့်သွင်းရန် အနည်းဆုံး English နှင့် Email အား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းပါ။
<<<< tusfiles.net >>>>
Credit To http://www.shwebook.com/
8:46 PM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
၂။ Bagan Keyboard ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် phone အား root လုပ်ထားရန်မလိုပါ။
၃။ မြန်မာစာနှင့် English စာနှစ်မျိုးစလုံးအတွက် စာလုံးတွဲများကို အစအဆုံး ရိုက်နှိပ်စရာမလိုသည့် အကြံပေးစနစ် (Suggestion System) ပါရှိပါသည်။
၄။ အသုံးများသည့်စကားလုံးတွဲများကို Suggestion System မှပေးထားသော အကြံပေးချက်များ မလုံလောက်သေးပါက မိမိစိတ်ကြိုက် ပေါင်းထည့်အသုံးပြုနိုင်သော User Dictionary စနစ်ပါရှိပါသည်။
၅။ စကားလုံးတွဲများကို မိမိစိတ်ကြိုက် ထည့်သွင်းရာတွင် User Dictionary တွင်သွားရောက်ထည့်သွင်းနိုင်သကဲ့သို့ စာရိုက်နေစဉ်တွင်လည်း စကားလုံးတွဲပေါ်တွင် Double Touch နှိပ် ၍ ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
၆။ သိမ်းဆည်းထားသော User Dictionary မှစကားလုံးတွဲများသည် software အား uninstall လုပ်ခြင်း၊ version upgrade လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပျောက်ပျက်သွားခြင်းမရှိပဲ ဆက်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇။ စာရိုက်ရာတွင် Shift Key ကို အသုံးမပြုလိုပါက Pop-Up များကိုသုံးပြုကာ လျင်မြန်စွာ ရိုက်နိုင်ပါသည်။
၈။ Symbol , Smiles များ စုံလင်ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းလက်ကွက်ပါဝင်ခြင်း၊ Voice Input (English)ပါဝင်ပါသည်။
၉။ ဘာသာစကားအသစ် (ဥပမာ- မွန်၊ရခိုင်)၊ လက်ကွက် Font (ဥပမာ- myanmar3) စသည်တို့ကို ထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါက အသစ်ပြန် Install လုပ်စရာမလိုပဲ Language Package များကိုထည့်သွင်းရုံဖြင့် လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၀။ Bagan Keyboard ကို Android OS Version 1.5 (Cupcake) မှ 4.2 (Jelly Bean) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၁။ Bagan Keyboard သည် အသုံးပြုသူ အတွက် စကားတွဲအသစ်များကို အပေါ်မှာပေါ်လာသည့် စာလုံးကို
2 ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်မှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ မှတ်သားထားခြင်းဖြင့် အသုံးပြုချိန် ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ လျှင်မြန် လွယ်ကူစွာ စာစီနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
***Bagan Keyboard ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖုန်းမှတဆင့် SMS ပို့ခြင်း၊ Gtalk , Facebook Message များပို့ခြင်း တို့ကိုအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ပါသဖြင့် အသုံးနည်းသော ပါဠိစကားလုံးများနှင့် ပါဌ်ဆင့်အချို့ကို လက်ရှိ Version တွင် ခေတ္တချန်ထားပါသည်။
***စာလုံးပေါင်းအကြံပေးစနစ်တွင်လည်း ယခု BETA Version တွင် မပြည့်စုံမှုများရှိနေပြီး၊ မကြာမီထွက်မည့် Version အသစ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ မကြာမီ အခြားသောတိုင်းရင်းသာား ဘာသာစကားများအတွက် ထပ်မံဖြည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားပေးမှုအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Bagan Keyboard Beata (Zawgyi + English) ကိုအောက်က Link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Bagan Keyboard Beta (Zawgyi+English) အားရယူရန်
http://www.bitmyanmar.com.mm/kanaung/bagankeyboard တွင်လည်း ၀င်ရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။
Credit To Myanma Mobileapp
SHARP SH530 ကို Root လုပ်နည်း
4:51 PM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, SHARP No comments
ဒီတစ်ခါ ဖုန်းထွက်တာမကြာသေတဲ့ SHARP SH530 ကို Root ကြည့်ရအောင် ဒိကောင်လဲ အထဲက
သုံးခဲ့တဲ့ CPU က clone phone တွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ cpu အမျိုးအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MT6577 အမျိုးစာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒိကောင်ကို root ဖို့ အတွက် အရင်ဆုံ cpu driver ကိုအရင်သွင်းပါ
< Driver ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန် >
< Root ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန် >
ဒေါင်လို့ ရတဲ့ zip ဖိုင်းကိုဖြည့်လိုက်ပါ အထဲမှာ root ဖိုင်းရယ် driver ရယ်ရှိပါတယ်
root လုပ်ဖို့ အတွက် root ဖိုင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါ အထဲက Run Me နေရာမှာနှိပ်ပါ
1 Mornal နေရာကိုနှိပ်ပြီ root မှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကွန်ပျူတာ ကီဘုတ်က 1 ကိုနှိပ်ပြီ enter နှိပ်ပါ ဒါဆို CDM အကွက်ထဲက အစိမ်ရောင်စာတန် Running....
ပေါ်လာရင် ဖုန်းမှာသွားကြည့်ပါ ( Do Not Restore & Restore My date ) စာတန်တက်လာပါမယ်
ဒါဆို Restore My date စာတန်ကိုရွေးပြီ enter ဆက်နှိပ်ပါ CDM အကွက်က နောက်ထပ်စာတန်
reboot your device 10 seconds .... စာတန်တက်လာရင် ဖုန်းကိုပါဝါအမြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါ ပြီရင်ချက်ခြင်
ပါဝါပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ CDM ကအလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါမယ် စာတန်တက်လာပြီ ရပ်နေရင် enter ကိုဘဲနှိပ်ပေးပါ နောက်ဆုံ CDM အကွက်ပိတ်ပြီ ဖုန်း reboot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင် Superuser app
4:49 PM LG, mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
LG Optimus L7 ကို root လုပ်မဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အရေကြီးတာ phone driver ပါ
ဖုန်း driver မရှိရင် root လုပ်လို့ ဘယ်လို့ မှမအောင်မြင်ပါဘူ ကဲ root လုပ်ဖို့ အတွက်
- LG mobile usb driver ကိုဒေါင်ရန်-
-LG Optimus L7 အတွက် Root ဖိုင်းကိုဒေါင်ရန်-
ပြီရင် ဖုန်းကို usb နဲ့ computer မှာချိတ်ပေးလိုက်ပါ ပြီရင်ခဏနေပါ computer ကဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင်
cmd အကွက်ကိုပြန်သွားပြီ root လုပ်ဖို့ အတွက် (1) ကိုနှိပ်ပြီ enter နှိပ်ပါ ဖုန်းကခဏနေ reboot ကျပြီပြန်တက်လာရင် root လို့ ပြီပါပြီ ကိုယ်က root ထားတာကိုပြန်ပြီ root မလုပ်ခြင်တောဘူဆိုရင်
စောစောက cmd အကွက်မှာ (2) ကိုနှိပ်ပြီ enter နှိပ်ပေးလိုက်ပါ root လုပ်ထားတာပြန်ပျက်သွားမှာပါ
4:16 PM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, Samsung No comments
ဒီပုံအတိုင်တက်လာရင် vol-up ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် ဒီလိုမျိုတက်လာရင် downloand mode
ဒါဆိုစောစောက ဖွင့်ထားတဲ့ odin ဇယာကွက်ကိုသွားပြီ ဖုန်းကို usb နဲချိတ်ပေးလိုက်ပါ
ဒီပုံအတိုင် odin ဇယာကွက်မှာ အ၀ါရောင်တက် လာရင် odin နှင့် မိမိဖုန်းကို ချိတ်ဆက်မူ
ဒါဆို odin ဇယာရဲ့ PDA နေရာမှာ စောစောကဒေါင်ထားတဲ့ CWM zip ဖိုင်းကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆို start နေရာမှာနှိပ်ပါ ခဏနေ စောစောကအ၀ါရောင် စာတန်နေရာမှာ အစိမ်ရောင် PASS စာတန်
တက်လာရင် uSb ကြိုကိုဖြုတ်လိုက်လို့ ရပါပြီ ဒါဆိုစောစောက ဒေါင်ထားတဲ့ root zip ဖိုင်းကို
sd card ထဲcopyကူပြီ ဖုန်းထဲပြန်ထည့်ပါ ပြီရင် ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပြီ ခဏထားတာပါ ပြီရင်
vol-up + home+ power ကိုပြိုင်တူနှိပ်ပါ ပြီရင် ဒီပုံအတိုင် CWM recovery တက်လာပါမယ်
ဒါဆို vol ခလုတ်တွေ အသုံးပြုပြီ install zip form sdcard ကိုသွားပြီ home ခလုတ်နဲ့ဝင်လိုက်ပါ
ပြီရင် စောစောက sd card ထဲသွင်းထားတဲ့ root ဖိုင်းကို install လုပ်ပေးပြီ reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ
ဖုန်းက boot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင် root လုပ်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
အကယ်၍နဂို recovery mode ပြန်ရခြင်ရင် စောစောက odin နဲ့cwm သွင်းတဲ့အတိုင်အောက်ကzipဖိုင်း
ကိုပြန်သွင်းလိုက်ရင်နဂို recovery mode ပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်
Original recovery zip ဖိုင်းကိုဒေါင်ရန်
i mobile phone တွေကိုကလိလွန်ပြီ logo မှာရပ်နေသော phone တွေကို boot ပြန်တက်အောင် factory reset ပြန်ချနည်း
4:09 PM i mobile, mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ 1 comment
i mobile phone တွေကို root လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကလိလွန်သွားလို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် boot ပြန်မတက်ဘဲ
imobile logo မှာရပ်နေ၍ ခေါင်မီးတောက်နေတဲ့ ဘောဒါတွေအတွက် boot ပြန်တက်အောင်
factory reset ပြန်ချလို့ ရပါတယ် ဒီလို reset ပြန်ချဖို့ အတွက်ဖုန်းမှာ Lewa (TWRP) Touch Recovery mode
သွင်းရပါမယ် Lewa (TWRP) Touch Recovery mode သွင်းမဲ့ဘောဒါများ အရင်ဆုံး cpu driver ကိုအရင်သွင်းထားရပါမယ် imobile အတွက် driver သွင်းနည်းကို ( ဒီကနေ ) ၀င်ပြီလေ့လာလိုက်ပါ
Lewa (TWRP) touch recovery ဖိုင်းကိုဒေါင်ရန်
Friends, Now i shareabeautiful popular post widget to your blogger. It make your blog more professional and also attract visitors. This widget created by Abu Farhan. You can easy to add this widget on your site. Please follow this post and install it on your blog. Try it and enjoy…
6:53 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
ကွန်ပျူတာ software အသုံပြုသူ အတွက် မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်လေးတွေပါ
လိုအပ်တဲလူတွေ အောက်ကနေ ဒေါင်သွားလိုက်ပါ
ကိုယ်ပိုင် -Laptop အသုံးပြုသူများလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လေးတွေ
6:50 AM windowဆိုင်ရာ No comments
အပူချိန်မြင့်မားလာလျှင် ဘယ် electronic device တွေမှ ခံနိုင်မှု
မရှိပါဘူး။တချို့  သောLaptop တွေဟာ အထူနဲ့ ထုပ်လုပ်ပြီး တချို့  Laptop တွေကို ပါးလွှာအောင်
ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။အပူပိုင်းနိုင်ငံ အသုံးပြုမှုနဲ့ အအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေ အသုံးပြုမှုဆိုပြီး
ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိပါတယ်။ အထူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပါးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပူချိန်ညှိမှုကိုတော့ အားလုံး
လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ပန်ကာ (fan) တွေနဲ့ အောက်ဘက်၊ ဘေးဘက်တွေမှာ တပ် ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို
အသုံးပြုသူတွေဟာ သတိထားကြရပါတယ်။ ဒီ function တွေဟာ power management
တွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ အဓိက အပူချိန်ကို ထိန်းဖို့ လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
- Laptop တွေကို မျက်နှာပြင်ညီညာတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါ။ မျက်နှာပြင်
မညီညာတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါက အောက်လက်မှာရှိတဲ့ လေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပြီး
အပူချိန် တက်ပါလိမ့်မယ်။- Laptop ဝယ်လာတဲ့အခါမှာ display screen နဲ့ keyboard ကြားမှာ ခံထားတဲ့
keyboardprotector တွေကို ဖယ်ရှားပြီး သုံးပါ။ အောက်ဘက်က fan တွေအတွက်
အပေါ်ဘက်ကနေပြီး လေဝင်၊လေထွက်တွေကို ပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
- Laptop fan တွေရဲ့ ဆူညံသံကို နားထောင်ပါ။ Rpm မြင့်လာလေ အသံကျယ် လာလေ
ဘာကြောင့် မြင့်သလဲဆိုရင် အပူချိန် တက်ပြီး fan တွေပို အလုပ်လုပ်လို့
- Fan တွေမှာ ဖုန်တွေ အမှိုက် တွေကို ၆လ တစ်ခါ၊ ၁နှစ်တစ်ခါ maintain
လုပ်ပေးပါ။ Rpmကျလာပါက အအေးပေးစနစ် ချွတ်ယွင်းလာပြီး Laptop ကို အပူချိန်
သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းထားမယ့်အိတ်ကို ဝယ်ယူဖို့ပါပဲ။ ဒီအိတ်ဟာ သယ်ယူမှုအတွက် အသုံးဝင်ခြင်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Laptop တစ်ခုလုံးအတွက်
အလေးချိန် ဖိမှု၊ ပြုတ်ကျမှု၊ အပူချိန် ထိန်းညှိမှု၊ ESD (ElectroStatic
Discharge), EMI(Elictromagnetic Interfrence) သို့မဟုတ် RFI (Radio Frequency Interferce)
စတဲ့ဘေးပြင်ပ နှောက်ယှက်မှု တွေကိုပါ ဝန်ဆောင်မှု တွေ ပေးပါတယ်။
မိမိဝယ်လိုက်တဲ့ Laptop အတွက်တစ်ပါတည်း ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Laptop ကို ဝယ်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာSystem အမှားတွေကိုအော်တိုပြင်ပေးနေတဲ့ ASC Software လေးပါ
6:46 AM software မြို့ တော်, windowဆိုင်ရာ No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆော့ဝဲလေးကတော့အရမ်းကောင်းပါတယ် ကွန်ပျူတာရှိတဲ့သူတိုင်းတင်ထားသင့်တဲ့ 
ပေးထားလိုက်သူ့ ဟာသူအားလုံးရှင်းပေးပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်လည်းရှင်းပေးပါတယ် အင်တာနက်မှာလည်း free
ယူ လို့ ရပါတယ်မသိရင်လည်းဒီနေရာကနေယူလိုက်ပါ free version ဖြစ်လို့Registor
လုပ်စရာမလိုပါဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှားတွေကို သူ့ ဟာသူပြင်သွားပါလိမ့်မယ်
I Mobile I style Q2 ကို offical firmware ပြန်တင်နည်း
6:42 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
I Mobile I style Q2 ကို firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကောင်က Q2 အတွက်ဘဲနော် Q2 Dou မှာ တင်လို့ မရပါဘူ Q2 ကို firmware မတင်ခင် Q2 ရဲ့
I Mobile I style Q2 Rom ကိုဒေါင်ရန်
China Clone Android version 4.1.1 phone တွေကို root လုပ်နည်း
6:37 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
China Clone Android version 4.1.1 phone တွေကို root လုပ်ခြင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်
ဒီပို့ ကို အလုပ်မအားတဲ့ ကြာကနေ တင်ပေးလိုက် အခုတစ်လော ကျွန်တော် အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ 
blog ဘက်ကို လှည့်မကြည့်နိုင်တာပါ ထိုင်းရောက်Itလူငယ်များအဖွဲ့ 
ထဲက member တစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လက်တည့်စမ်ပေးထားတာပါ
root လုပ်မဲ့ ဘောဒါများ အရင်ဆုံလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေကို အောက်ကနေဒေါင်လိုက်ပါ
Computer mouse မှာ Right Click ထောက်လိုက်ပြီ အပုံလေးနဲ့ လန်ခြင်သူများအတွက်
6:29 AM windowဆိုင်ရာ No comments
Computer mouse မှာ Right Click ထောက်လိုက်လို့ပုံလေးနဲ့ထားချင်ရင် သူငယ်ချင်းများအတွက် အောက်ကနေဒေါင်းယူလိုက်ပါ
6:21 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
5:34 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ2comments
ios 6.1.2 ကိုjailbreak လုပ်နည်း
5:22 AM Ipad, mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
Apple ios 6.1.2 ကိုjailbreak လုပ်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက်ပါ လုပ်နည်းကတော အရင် 6.1တွေလိုပါဘဲ
အခုဒိကောင်က 6.1.2 ကိုတစ်ကယ်jailbreak လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ipad4 မှာ6.1.2
တင်ပြီ လုပ်စမ်ထားပါတယ် ဘာ error ပြသနာ မတက်ပါဘူ အာလုံးအိုကေ တယ် 6.1.2 ကို update
jailbreak မလုပ်ခင် မိမိစက်က 6.1.2 မဖြစ်သေဘူဆိုရင် itunes ကနေဘဲ update 6.1.2 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါ
5:16 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
Huawei phone တွေကို firmware ပြန်တင်မဲ့ဘောဒါတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ huawei android phone
တွေအကုန်လုံးနီပါ firmware တင်နည်းတူတူပါဘဲ firmware တင်ဖို့ အတွက် အရေကြီးဆုံက SD card
ကောင်ကောင်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ် SD card မကောင်ရင် firmware တင်လို့ မအောင်မြင်ပါဘူ
ကဲ huawei phone တွေfirmware တင်မဲ့ဘောဒါများ huawei offical ဆိုဒ်ကနေ မိမိဖုန်းမော်ဒယ်နံပါတ်
firmware ကို ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
5:09 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
IOS 6+ အထက်တွေမှာ MMKeyboard6+ နဲ့ အဆင်မပြေ error ထလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အထူသဖြင့် ipad ပိုင်ရှင် ဘောဒါများ အတွက် MMkeyboard 6+ လုံဝ အဆင်ပြေစွာသုံးလို့ ရပါပြီ လုပ်နည်းတော အောက်ပါ
အပုံအတိုင် လိုက်လုပ်သွားပါ ကျွန်တော အပါဝင် ဘောဒါတစ်ယောက်နှစ်ယောက် စမ်သပ်လို့အဆင်ပြေသွားပါပြီ အာလုံးအဆင်ပြေအောင် ပို့ အနေနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ
အရင်ဆုံ cydia.macforus.com ကနေ MMkeyboard5+ ကိုပြန်ဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါပြီရင် အသစ်တင်ထားပေးတဲ့ Zawgyi.hardware KB 6+ ကို အရင် install လုပ်ပါ ပြီရင် MMkeyboard6+ ကို
4:04 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
ကိုယ်ပိုင် -Laptop အသုံးပြုသူများလိုက်နာသင့်တဲ့အချ...
I Mobile I style Q2 ကို offical firmware ပြန်တင်နည...
Computer mouse မှာ Right Click ထောက်လိုက်ပြီ အပုံေ...
I Mobile I style Q3 ကို offical firmware ပြန်တင်နည...